Korkoddii miiljalee yk Ibsadabalataa filataamee gulaala. Duura miiljalee ykn Ibsadabalataa cuqaasitii isa booda ajaja kana filadhu.
Gulaali - Miiljaleewwan filadhu
Miiljalee yk Ibsadabalataa kan barruu gulaaluuf, Naannoo miiljalee fuula jala cuqaasi, yk dhumaa galmee cuqaasi.
Miiljalee yk Ibsadabalataa Akaakuu lakkaawwii fili.
Miiljalee fi ibsadabalataa ati saagdetti ufmaan lakkoofsoota tarree ramada. Lakkaawwii ufmaaf ijaarsa jijjiiruu yoo barbaadde, Meeshaalee - Miiljaloota/Ibsadabalataa.
Akka korkoddii miiljalee yk ibsadabalataatti Arfiiwwan Addayaa saaga.
Akaakuu yaadannoo, jechuun miiljalee yk ibsadabalataa saaguuf barbaaddu fili. Miiljaleen jala fuula ammaatti yammuu galu, ibsii dabalataa immoo dhuma galmeetti gala.
Ibsadabalataa miiljaleetti jijjiira.
Miiljalee ibsadabalataatti jijjiira.
Galmicha keessaa gara korkoddii miiljalee yk ibsadabalataa duraaniiti siqsa.
Galmicha keessaa gara korkoddii miiljalee yk ibsadabalataa itti aanantii siqsa.
Miiljalee itti aanuu
Qaaqa Miiljaloota/Ibsadabalataa Saagi.